အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၉) - For her Myanmar
“ကဲ ပြောပါဦး ဟန်နီမေ မင်းဘယ်လိုမိန်းမလဲ”
ဧက အိပ်မက်မက်နေသည်။ အိပ်မက်ထဲတွင် ဟန်နီနှင့်သူ အလွန်ရှည် လျားသော တံတားကြီးတစ်ခု ပေါ်တွင်ရောက်နေသည်။ တံတားလမ်းအဆုံးသည် မြူများဖုံးနေသောကြောင့်မမြင်ရ။ ဧက ကတံတားအဆုံးကိုသွားဖို့သာ စိတ်အားသန်နေသည်။ ထိုတံတားအဆုံးတွင် သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် ဆွတ်ပျံကြည်နူးဖွယ်ရာ တစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်ဟု အလိုလို ခံစားသိနေသည်။ ဧက က ဟန်နီ့လက်ကို တင်းတင်းဆွဲကာ ခပ်မြန်မြန်ပြေးနေသည်။ သို့သော် ဟန်နီ့လက်က တဖြည်းဖြည်း လျော့လာပြီး လက်တွဲချင်းပြုတ်သွားသည်။
ဧက စိုးရိမ်တကြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဟန်နီက ဧကကို သူစိမ်းဆန်သော မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ပြီး ကျောခိုင်းထွက်ခွာသွားသည်။ ဟန်နီ သွားနေသည့် လမ်းကြောင်းဦးတည်ရာတွင် လူတစ်ယောက်ရှိနေသည်။ ဒီလူ… ဒီလူက ဟန်နီပြနေကျဆေးခန်းက ဆရာဝန်။ ဟန်နီက ထိုလူဆီတည့်တည့်လျှောက်သွား ပြီး ထိုလူနှင့်လက်ချင်းတွဲကာ ထွက်သွားသည်။ ဧက ပြေးလိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့ မမီတော့။ ဟန်နီက သူ့မြင်ကွင်းမှ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားကာ တံတားကြီးပေါ်တွင် သူတစ်ယောက်တည်းသာ ကျန်ခဲ့တော့သည်။
အသံနက်ကြီးနှင့် အော်လိုက်ပြီး ဧက အိပ်မက်မှ လန့်နိုးလာသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးချွှေးစေးများထွက်နေသော်လည်း လက်ဖျားများကအေးစက်နေသည်။ ကိုယ်ပေါ်မှ စောင်ကို ဖယ်ပစ်လိုက်ပြီး ခုတင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်။ အခန်းထဲတွင် ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လျှောက်ရင်း ဧက စိတ်တို့ ကယောက်ကယက် ဖြစ်နေသည်။ အိပ်မက်ကဘာလဲ။ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။ ဟန်နီက တကယ်ပဲ အဲ့ဒီလူနဲ့…။
ဧက စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ကုတင်ခေါင်းရင်းမှ ဖန်နာရီလေးကို ပစ်ခွဲလိုက်မိသည်။ ခွမ်းကနဲ ကွဲသံကြားမှ ဒေါသထွက်စရာ တွေလျော့ပါးသွားသလိုခံစားရသည်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၅ နာရီရှိပြီဖြစ်သည်။ ဧည့်ခန်းကိုထွက်ပြီး မှန်ချပ်များ နားက ဆိုဖာမှာထိုင်လိုက်ရင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မနက်ခင်းကိုကြည့်နေလိုက်သည်။ အရင်လို စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နှင့်တော့ မဟုတ်ချေ… နောက်ကျိနေသော စိတ်တို့နှင့် အတွေးပေါင်းများစွာက ဖမ်းဆုပ်မရ… သေချာသည်ကမူ ထိုဆရာဝန်နှင့်ဟန်နီ၏ ပတ်သက်မှုကို သေချာသိအောင် စုံစမ်းရမည်။
အမွှေးရည်ဖြန်းစက်မှ လာဗင်ဒါရနံ့လေးထွက်လာတော့ ဟန်နီ့ကိုပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်၊ ရိုက်ကွင်းမှာဆုံကြတဲ့ အချိန်၊ ဟန်နီ့ကိုတောင်းပန်ရင်း လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်၊ ဟန်နီနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်များကို ပြန်တွေးကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးလာမိသလို ဟန်နီ့ကိုလည်း သတိရလာသည်။ ချက်ချင်းပြေးတွေ့ချင်စိတ်ပေါက်လာသောကြောင့် ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး ဟန်နီ့ဆီသွားမည်။ ဟန်နီမနိုးသေးလည်း ကားပေါ်ကနေထိုင်စောင့်နေမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဟန်နီသည် ဒီနေ့မနက် စောစောစီးစီး အိပ်မက်လှလှလေးမက်ပြီး နိုးထလာသည်။ ညမအိပ်ခင် ဧက အကြောင်းလေးများ တွေးပြီးမှအိပ်လျှင် နောက်နေ့မနက်တွင် မင်္ဂလာရှိစွာ နိုးလာတတ်သည်။ မနက် ၆ နာရီ အချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ထွက်ကာစ နေရောင်အောက်တွင် ခြံထဲမှပန်းကလေးများကိုကြည့်ရတာ ကြည်နူးစရာ ကောင်းသည်။ မာမီစိုက်ထားသော သစ်ခွပန်းအိုးများကိုအပင်အားဆေးဖြန်းပေးနေစဉ် ခြံဝမှ ခေါ်သံကြားလိုက်သည်။
“မမေ အစောကြီး နိုးနေတာလား”
“ဟယ် ဒေါက်တာပါလား စောစောစီးစီး ဘာကိစ္စလဲ”
ဇွဲသစ်က စီးလာသော စက်ဘီးကို ဒေါက်ထောက်ထားလိုက်ပြီး ဟန်နီတို့ ခြံစည်းရိုးနားကပ်လာလိုက်သည်။ ဟန်နီတို့ခြံက အုတ်တစ်ဝက် သံဆူးကြိုးတစ်ဝက်နဲ့ ကာထားသောကြောင့် ဟန်နီ့ မျက်နှာကို သေချာမြင်ရပြီး စကားလှမ်းပြောဖို့ အဆင်ပြေသည်။
“ကျွန်တော်က မနက်တိုင်း စက်ဘီးစီးနေကျ မမေရဲ့.. ကျန်းမာရေးပေါ့”
“ဒေါက်တာက ဆေးရုံမှာ night duty တွေ ဘာတွေမကျဘူးလား””
““ကျတာပေါ့ မမေရဲ့… night duty မကျတဲ့ရက်တွေစီးတာ””
“ သြော် ကောင်းလိုက်တာ”
“မမေလည်း ကျန်းမာရေးကိုလိုက်စားတဲ့အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် လုပ်ပါလို့လည်း အကြံပေးပါရစေ”
“ဟန်နီလည်း လုပ်ချင်ပါတယ်.. မလုပ်ဖြစ်သေးတာ အိမ်မှာတော့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်တယ် body beauty အတွက်ပေါ့… တကယ်တော့ ဟန်နီက အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဒေါက်တာ့လို စက်ဘီးစီးတာ လမ်းလျှောက်တာ တောင်တက်တာ အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တာ”
“အင်း စိတ်ကူးကောင်းသားပဲ လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတာပါ.. မမေအတွက် အတူတူလုပ်ပေးမယ့်သူရှိနေတာပဲ”
ဟန်နီက ပြုံးလိုက်ရင်း “အင်း နောက်တော့လုပ်ဖြစ်မှာပါ” လို့ ပြန်ဖြေသည်။
ဇွဲသစ်က ဟန်နီနှင့်တော်တော်ကြာကြာ ခြံစည်းရိုးခြား၍ စကားပြောပြီးနောက် စက်ဘီးစီးကာ ပြန်ထွက်သွားသည်။
ထိုမြင်ကွင်းကို ကြည့်ကာ တစ်ယောက်တည်း ဒေါသတွေထွက်နေရသူက ဧက ဖြစ်သည်။ စောစောစီးစီး ချစ်သူမျက်နှာကို တွေ့ချင်လွန်းလို့ လာခဲ့ကာမှ မမြင်ချင်ဆုံးမြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဟိုလူကထွက်သွားတာတောင် ဟန်နီက အိမ်ထဲမဝင်ဘဲ လှမ်းကြည့်နေသေးသည်။ ဧက ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီး ဟန်နီတို့ခြံရှေ့ကိုသွားကာ ခြံတံခါးကို တဂျိမ်းဂျိမ်းမြည်အောင် ဆောင့်တွန်းလိုက်သည်။
တံခါးသံကြောင့် ဟန်နီ ရုတ်တရက်လန့်သွားကာ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဧက ဖြစ်နေသည်။ ဧက အကြောင်းတွေး နေမိတုန်း ဧက ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ဟန်နီပျော်သွားသည်။ ခြံတံခါးနားအပြေးသွားကာ တံခါးကိုဖွင့်လိုက်ရင်း…
“ကို ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ ရုတ်တရက်ကြီး”
“ဘာလဲ ငါလာတာ မင်းကမကြိုက်လို့လား”
“ကို စကားကို ဘယ်လိုကြီး ပြောလိုက်တာလဲ”
ဧကရဲ့ အေးစက်စက်စကားသံကြောင့် ဟန်နီကြက်သီးမွှေးညှင်းများပင် ထချင်သွားသည်။ ဟိုတစ်ခါလို အသုံးအနှုန်း၊ ဟိုတစ်ခါလိုအကြည့်… ကို ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲမသိ။
“ငါမင်းနဲ့ စာရင်းရှင်းစရာရှိတယ်… မင်းအိမ်ထဲဝင်ပြောရမှာလား ငါ့ကားပေါ်လိုက်ခဲ့မှာလား”
“ကို ဟန်နီက အိမ်နေရင်းအဝတ်အစား…”
“ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဒီနားမှာပဲကားရပ်ထားပြီးပြောမှာ ဘယ်မှမသွားဘူး”
ဟန်နီလည်း ခြံတံခါးကို မာမီမကြားအောင်ဖွင့်လိုက်ပြီး ဧကရဲ့ကားပေါ်လိုက်သွားလိုက်သည်။
“ကို ဘာတွေပြောနေတာလဲ? ဟန်နီနားမလည်ဘူး”
ဧက က နီရဲနေသောမျက်လုံးများနှင့် ဟန်နီ့ကို စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီး…
“ဘာဖြစ်ရမှာလဲ… ငါမဟုတ်တဲ့တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ငါ့ကွယ်ရာမှာ စကားပြောနေတာ မင်းဖောက်ပြန်ချင်နေတာ မဟုတ်လား”
“ကို စကားကိုဆင်ခြင်ပြောပါ။ ဒေါက်တာဇွဲသစ်က ဟန်နီနေမကောင်းရင် ကုပေးနေကျဆရာဝန်ပါ.. ပြီးတော့သူက ကိုမသိတဲ့လူလည်း မဟုတ်ဘူး”
“မသိဘူး ငါသူ့ကိုမြင်ပဲမြင်ဖူးတာ။ သူနဲ့ငါမသိဘူး။ သိစရာလည်းမလိုဘူး… ဟန်နီမေ… မင်းမှတ်ထားပါ မင်းဘဝမှာ ယောက်ျားဆိုလို့ ငါတစ်ယောက်တည်းနဲ့ပဲ ပတ်သက်ရမယ်”
“ကိုရယ် ဟန်နီလုပ်နေတဲ့အလုပ်က ဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှ မပတ်သက်ဘဲနေလို့ရတဲ့ အလုပ်မှ မဟုတ်တာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုမကြိုက်မှန်းသိလို့ ဟန်နီအများကြီး ရှောင်ခဲ့တယ်လေ… ဒေါက်တာက ဟန်နီ့ကို ဆေးကုပေးတဲ့သူလေ… မနက် ဝေလီဝေလင်းမှာတောင် ဆေးထကုပေးထားတာ ဟန်နီက မခေါ်မပြောလို့ကောင်းပါ့မလား”
ဧက ကိုကြည့်ရင်း ဟန်နီစိတ်ပျက်သွားသည်။ မနေ့ကလေးတင်မြင်ဖူးခဲ့သော နွေးထွေးသောလူတစ်ယောက်မဟုတ်တော့။ ကြင်နာတတ်သော ယောက်ျားတစ်ယောက် မဟုတ်တော့။ သံသယတွေနှင့် ဒေါသတွေပြည့်နှက်နေသော မကောင်းဆိုးဝါး တစ်ကောင်နှင့် တူနေသည်။ ဘာလို့ချက်ချင်းကြီး ပြောင်းလဲသွားတာလဲ စဉ်းစားလို့ကိုမရ။
“ကို… ဟန်နီတို့ စကားဆက်ပြောနေရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး… ဒီတော့ ကို စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် အရင်ကြိုးစားကြည့်… ပြီးတော့မှ ဟန်နီတို့စကားဆက်ပြောတာပေါ့”
ဟန်နီက ကားတံခါးကို ဖွင့်ပြီးထွက်မလို့ပြင်လိုက်သည်။ ဧက က ဟန်နီ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး…
“ဒါက ဘယ်လဲ? ငါစကားပြောလို့မပြီးသေးဘူး’’
“နောက်မှပြောမယ်ကို.. ဟန်နီ ဘာမှထပ်မပြောချင်တော့ဘူး”
“ဘာလဲ ထပ်ပြောရင် မင်းနဲ့ အဲ့ဒီကောင်အကြောင်းတွေပေါ်ကုန်မှာစိုးလို့လား”
ဧကရဲ့စကားကြောင့် ဟန်နီ့ရင်ထဲမှာ ဆတ်ဆတ်ခါအောင်နာသွားသည်။ ဟန်နီကတော့ ဧကကို ချစ်လိုက်ရတာ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရတာ သူ့ဘက်ကနေ ကာကွယ်ပေးလိုက်ရတာ။ သူမို့လို့ ဟန်နီ့ကို ဒီလိုစွပ်စွဲရက်တယ်။ ဟန်နီကိုယ်တိုင် သတိမထားမိလိုက်ဘဲ ဟန်နီ့လက်တစ်ဖက်က သူ့ပါးကို လွှဲရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်။ ဧက မျက်လုံးများက ချက်ချင်း ပို၍ခက်ထန်သွားသည်ကို မြင်တော့မှ ဟန်နီမှားသွားမှန်း သိလိုက်သည်။ ပွင့်နေပြီးသား ကားတံခါးကနေ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလိုက်စဉ်မှာပဲ ဧကရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က ဟန်နီ့ရဲ့ လည်ပင်းကို ရောက်လာသည်။
ဟန်နီ ဧကရဲ့လက်များကို ဖြုတ်ချရန် အမျိုးမျိုးကြိုးစားသည်။ ကုတ်ဖဲ့ရိုက်နှက်နေသော်လည်း ဧက က ဘာမှဖြစ်ပုံမပေါ်။ ဟန်နီ့လည်ပင်းကို ပို၍တင်းကြပ်အောင် ညှစ်လိုက်သည့် အချိန်တွင် နာကျင်မှု၊ အသက်ရှူမဝမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုများဖြင့် ဟန်နီ မျက်ရည်များပင်ကျလာသည်။
“ကိုဧကသု ရှင် ဘာလုပ်နေတာလဲ… အဲ့ဒီလက်တွေကို ချက်ချင်းလွှတ်လိုက်ပါ”
ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိသော ယမုံက ဟန်နီ့ဘေးနားကနေ အော်ပြီး အတင်းဖယ်လိုက်တော့မှ ဧက က ဟန်နီ့လည်ပင်းကို လွှတ်လိုက်သည်။ ယမုံက ဟန်နီ့ကို လက်မောင်းကနေတွဲကာ ကားအပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အိမ်ထဲကိုတွဲခေါ်သွားသည်။
ဟန်နီထွက်သွားပြီးမှ ဧက ပုံမှန်အသိပြန်ဝင်လာသည်။ ဘာလို့ ဟန်နီ့ကို ဒီလောက်ထိကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လုပ်လိုက်မိသည်ဆိုသည်ကို သူ စဉ်းစားမရတော့။ ချစ်လွန်းလို့ စိတ်ပူလွန်းလို့ပါ ဟန်နီရယ်…။ ကို့ကို ဒီတစ်ခါလည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါဦးနော်…
“ကဲ ပွောပါဦး ဟနျနီမေ မငျးဘယျလိုမိနျးမလဲ”
ဧက အိပျမကျမကျနသေညျ။ အိပျမကျထဲတှငျ ဟနျနီနှငျ့သူ အလှနျရှညျ လြားသော တံတားကွီးတဈခု ပျေါတှငျရောကျနသေညျ။ တံတားလမျးအဆုံးသညျ မွူမြားဖုံးနသေောကွောငျ့မမွငျရ။ ဧက ကတံတားအဆုံးကိုသှားဖို့သာ စိတျအားသနျနသေညျ။ ထိုတံတားအဆုံးတှငျ သူတို့နှဈယောကျအတှကျ ဆှတျပြံကွညျနူးဖှယျရာ တဈခုခုရှိလိမျ့မညျဟု အလိုလို ခံစားသိနသေညျ။ ဧက က ဟနျနီ့လကျကို တငျးတငျးဆှဲကာ ခပျမွနျမွနျပွေးနသေညျ။ သို့သျော ဟနျနီ့လကျက တဖွညျးဖွညျး လြော့လာပွီး လကျတှဲခငျြးပွုတျသှားသညျ။
ဧက စိုးရိမျတကွီး လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ဟနျနီက ဧကကို သူစိမျးဆနျသော မကျြလုံးမြားဖွငျ့ကွညျ့ပွီး ကြောခိုငျးထှကျခှာသှားသညျ။ ဟနျနီ သှားနသေညျ့ လမျးကွောငျးဦးတညျရာတှငျ လူတဈယောကျရှိနသေညျ။ ဒီလူ… ဒီလူက ဟနျနီပွနကေဆြေးခနျးက ဆရာဝနျ။ ဟနျနီက ထိုလူဆီတညျ့တညျ့လြှောကျသှား ပွီး ထိုလူနှငျ့လကျခငျြးတှဲကာ ထှကျသှားသညျ။ ဧက ပွေးလိုကျသညျ။ ဒါပမေဲ့ မမီတော့။ ဟနျနီက သူ့မွငျကှငျးမှ တဖွညျးဖွညျး ပြောကျကှယျသှားကာ တံတားကွီးပျေါတှငျ သူတဈယောကျတညျးသာ ကနျြခဲ့တော့သညျ။
အသံနကျကွီးနှငျ့ အျောလိုကျပွီး ဧက အိပျမကျမှ လနျ့နိုးလာသညျ။ တဈကိုယျလုံးခြှေးစေးမြားထှကျနသေျောလညျး လကျဖြားမြားကအေးစကျနသေညျ။ ကိုယျပျေါမှ စောငျကို ဖယျပဈလိုကျပွီး ခုတငျပျေါမှဆငျးလိုကျသညျ။ အခနျးထဲတှငျ ခေါကျတုံ့ခေါကျပွနျလြှောကျရငျး ဧက စိတျတို့ ကယောကျကယကျ ဖွဈနသေညျ။ အိပျမကျကဘာလဲ။ ဘာအဓိပ်ပာယျလဲ။ ဟနျနီက တကယျပဲ အဲ့ဒီလူနဲ့…။
ဧက စိတျမထိနျးနိုငျဘဲ ကုတငျခေါငျးရငျးမှ ဖနျနာရီလေးကို ပဈခှဲလိုကျမိသညျ။ ခှမျးကနဲ ကှဲသံကွားမှ ဒေါသထှကျစရာ တှလြေော့ပါးသှားသလိုခံစားရသညျ။ နာရီကိုကွညျ့လိုကျတော့ မနကျ ၅ နာရီရှိပွီဖွဈသညျ။ ဧညျ့ခနျးကိုထှကျပွီး မှနျခပျြမြား နားက ဆိုဖာမှာထိုငျလိုကျရငျး ရနျကုနျမွို့ရဲ့ မနကျခငျးကိုကွညျ့နလေိုကျသညျ။ အရငျလို စိတျကွညျကွညျလငျလငျနှငျ့တော့ မဟုတျခြေ… နောကျကြိနသေော စိတျတို့နှငျ့ အတှေးပေါငျးမြားစှာက ဖမျးဆုပျမရ… သခြောသညျကမူ ထိုဆရာဝနျနှငျ့ဟနျနီ၏ ပတျသကျမှုကို သခြောသိအောငျ စုံစမျးရမညျ။
အမှေးရညျဖွနျးစကျမှ လာဗငျဒါရနံ့လေးထှကျလာတော့ ဟနျနီ့ကိုပထမဆုံးတှခေဲ့တဲ့အခြိနျ၊ ရိုကျကှငျးမှာဆုံကွတဲ့ အခြိနျ၊ ဟနျနီ့ကိုတောငျးပနျရငျး လကျဆောငျပေးခဲ့တဲ့အခြိနျ၊ ဟနျနီနဲ့ခဈြသူတှဖွေဈသှားတဲ့အခြိနျမြားကို ပွနျတှေးကွညျ့ရငျး စိတျထဲမှာ ကွညျနူးလာမိသလို ဟနျနီ့ကိုလညျး သတိရလာသညျ။ ခကျြခငျြးပွေးတှခေ့ငျြစိတျပေါကျလာသောကွောငျ့ ကိုယျလကျသနျ့စငျပွီး ဟနျနီ့ဆီသှားမညျ။ ဟနျနီမနိုးသေးလညျး ကားပျေါကနထေိုငျစောငျ့နမေညျဟုဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။
ဟနျနီသညျ ဒီနမေ့နကျ စောစောစီးစီး အိပျမကျလှလှလေးမကျပွီး နိုးထလာသညျ။ ညမအိပျခငျ ဧက အကွောငျးလေးမြား တှေးပွီးမှအိပျလြှငျ နောကျနမေ့နကျတှငျ မင်ျဂလာရှိစှာ နိုးလာတတျသညျ။ မနကျ ၆ နာရီ အခြိနျဖွဈသောကွောငျ့ ထှကျကာစ နရေောငျအောကျတှငျ ခွံထဲမှပနျးကလေးမြားကိုကွညျ့ရတာ ကွညျနူးစရာ ကောငျးသညျ။ မာမီစိုကျထားသော သဈခှပနျးအိုးမြားကိုအပငျအားဆေးဖွနျးပေးနစေဉျ ခွံဝမှ ချေါသံကွားလိုကျသညျ။
“မမေ အစောကွီး နိုးနတောလား”
“ဟယျ ဒေါကျတာပါလား စောစောစီးစီး ဘာကိစ်စလဲ”
ဇှဲသဈက စီးလာသော စကျဘီးကို ဒေါကျထောကျထားလိုကျပွီး ဟနျနီတို့ ခွံစညျးရိုးနားကပျလာလိုကျသညျ။ ဟနျနီတို့ခွံက အုတျတဈဝကျ သံဆူးကွိုးတဈဝကျနဲ့ ကာထားသောကွောငျ့ ဟနျနီ့ မကျြနှာကို သခြောမွငျရပွီး စကားလှမျးပွောဖို့ အဆငျပွသေညျ။
“ကြှနျတျောက မနကျတိုငျး စကျဘီးစီးနကြေ မမရေဲ့.. ကနျြးမာရေးပေါ့”
“ဒေါကျတာက ဆေးရုံမှာ night duty တှေ ဘာတှမေကဘြူးလား””
““ကတြာပေါ့ မမရေဲ့… night duty မကတြဲ့ရကျတှစေီးတာ””
“ သွျော ကောငျးလိုကျတာ”
“မမလေညျး ကနျြးမာရေးကိုလိုကျစားတဲ့အနနေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုခုလုပျသငျ့တယျလို့ ကြှနျတျောထငျတယျ လုပျပါလို့လညျး အကွံပေးပါရစေ”
“ဟနျနီလညျး လုပျခငျြပါတယျ.. မလုပျဖွဈသေးတာ အိမျမှာတော့ ပုံမှနျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖွဈတယျ body beauty အတှကျပေါ့… တကယျတော့ ဟနျနီက အဲ့ဒီလိုမဟုတျဘဲ ဒေါကျတာ့လို စကျဘီးစီးတာ လမျးလြှောကျတာ တောငျတကျတာ အဲ့ဒီလိုမြိုးလုပျခငျြတာ”
“အငျး စိတျကူးကောငျးသားပဲ လုပျနိုငျအောငျ ကွိုးစားဖို့ပဲလိုတာပါ.. မမအေတှကျ အတူတူလုပျပေးမယျ့သူရှိနတောပဲ”
ဟနျနီက ပွုံးလိုကျရငျး “အငျး နောကျတော့လုပျဖွဈမှာပါ” လို့ ပွနျဖွသေညျ။
ဇှဲသဈက ဟနျနီနှငျ့တျောတျောကွာကွာ ခွံစညျးရိုးခွား၍ စကားပွောပွီးနောကျ စကျဘီးစီးကာ ပွနျထှကျသှားသညျ။
ထိုမွငျကှငျးကို ကွညျ့ကာ တဈယောကျတညျး ဒေါသတှထှေကျနရေသူက ဧက ဖွဈသညျ။ စောစောစီးစီး ခဈြသူမကျြနှာကို တှခေ့ငျြလှနျးလို့ လာခဲ့ကာမှ မမွငျခငျြဆုံးမွငျကှငျးကို မွငျလိုကျရသညျ။ ဟိုလူကထှကျသှားတာတောငျ ဟနျနီက အိမျထဲမဝငျဘဲ လှမျးကွညျ့နသေေးသညျ။ ဧက ကားပျေါကဆငျးလိုကျပွီး ဟနျနီတို့ခွံရှကေို့သှားကာ ခွံတံခါးကို တဂြိမျးဂြိမျးမွညျအောငျ ဆောငျ့တှနျးလိုကျသညျ။
တံခါးသံကွောငျ့ ဟနျနီ ရုတျတရကျလနျ့သှားကာ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ဧက ဖွဈနသေညျ။ ဧက အကွောငျးတှေး နမေိတုနျး ဧက ကိုတှလေို့ကျရတော့ ဟနျနီပြျောသှားသညျ။ ခွံတံခါးနားအပွေးသှားကာ တံခါးကိုဖှငျ့လိုကျရငျး…
“ကို ဘယျလိုရောကျလာတာလဲ ရုတျတရကျကွီး”
“ဘာလဲ ငါလာတာ မငျးကမကွိုကျလို့လား”
“ကို စကားကို ဘယျလိုကွီး ပွောလိုကျတာလဲ”
ဧကရဲ့ အေးစကျစကျစကားသံကွောငျ့ ဟနျနီကွကျသီးမှေးညှငျးမြားပငျ ထခငျြသှားသညျ။ ဟိုတဈခါလို အသုံးအနှုနျး၊ ဟိုတဈခါလိုအကွညျ့… ကို ဘာဖွဈလာပွနျပွီလဲမသိ။
“ငါမငျးနဲ့ စာရငျးရှငျးစရာရှိတယျ… မငျးအိမျထဲဝငျပွောရမှာလား ငါ့ကားပျေါလိုကျခဲ့မှာလား”
“ကို ဟနျနီက အိမျနရေငျးအဝတျအစား…”
“ဘာမှမဖွဈဘူး ဒီနားမှာပဲကားရပျထားပွီးပွောမှာ ဘယျမှမသှားဘူး”
ဟနျနီလညျး ခွံတံခါးကို မာမီမကွားအောငျဖှငျ့လိုကျပွီး ဧကရဲ့ကားပျေါလိုကျသှားလိုကျသညျ။
“ကို ဘာတှပွေောနတောလဲ? ဟနျနီနားမလညျဘူး”
ဧက က နီရဲနသေောမကျြလုံးမြားနှငျ့ ဟနျနီ့ကို စူးစိုကျကွညျ့လိုကျပွီး…
“ဘာဖွဈရမှာလဲ… ငါမဟုတျတဲ့တခွားယောကျြားတဈယောကျနဲ့ ငါ့ကှယျရာမှာ စကားပွောနတော မငျးဖောကျပွနျခငျြနတော မဟုတျလား”
“ကို စကားကိုဆငျခွငျပွောပါ။ ဒေါကျတာဇှဲသဈက ဟနျနီနမေကောငျးရငျ ကုပေးနကေဆြရာဝနျပါ.. ပွီးတော့သူက ကိုမသိတဲ့လူလညျး မဟုတျဘူး”
“မသိဘူး ငါသူ့ကိုမွငျပဲမွငျဖူးတာ။ သူနဲ့ငါမသိဘူး။ သိစရာလညျးမလိုဘူး… ဟနျနီမေ… မငျးမှတျထားပါ မငျးဘဝမှာ ယောကျြားဆိုလို့ ငါတဈယောကျတညျးနဲ့ပဲ ပတျသကျရမယျ”
“ကိုရယျ ဟနျနီလုပျနတေဲ့အလုပျက ဘယျယောကျြားနဲ့မှ မပတျသကျဘဲနလေို့ရတဲ့ အလုပျမှ မဟုတျတာ။ ဒါပမေဲ့ ကိုမကွိုကျမှနျးသိလို့ ဟနျနီအမြားကွီး ရှောငျခဲ့တယျလေ… ဒေါကျတာက ဟနျနီ့ကို ဆေးကုပေးတဲ့သူလေ… မနကျ ဝလေီဝလေငျးမှာတောငျ ဆေးထကုပေးထားတာ ဟနျနီက မချေါမပွောလို့ကောငျးပါ့မလား”
ဧက ကိုကွညျ့ရငျး ဟနျနီစိတျပကျြသှားသညျ။ မနကေ့လေးတငျမွငျဖူးခဲ့သော နှေးထှေးသောလူတဈယောကျမဟုတျတော့။ ကွငျနာတတျသော ယောကျြားတဈယောကျ မဟုတျတော့။ သံသယတှနှေငျ့ ဒေါသတှပွေညျ့နှကျနသေော မကောငျးဆိုးဝါး တဈကောငျနှငျ့ တူနသေညျ။ ဘာလို့ခကျြခငျြးကွီး ပွောငျးလဲသှားတာလဲ စဉျးစားလို့ကိုမရ။
“ကို… ဟနျနီတို့ စကားဆကျပွောနရေငျ အဆငျပွမှောမဟုတျဘူး… ဒီတော့ ကို စိတျကိုတညျငွိမျအောငျ အရငျကွိုးစားကွညျ့… ပွီးတော့မှ ဟနျနီတို့စကားဆကျပွောတာပေါ့”
ဟနျနီက ကားတံခါးကို ဖှငျ့ပွီးထှကျမလို့ပွငျလိုကျသညျ။ ဧက က ဟနျနီ့လကျကိုလှမျးဆှဲလိုကျပွီး…
“ဒါက ဘယျလဲ? ငါစကားပွောလို့မပွီးသေးဘူး’’
“နောကျမှပွောမယျကို.. ဟနျနီ ဘာမှထပျမပွောခငျြတော့ဘူး”
“ဘာလဲ ထပျပွောရငျ မငျးနဲ့ အဲ့ဒီကောငျအကွောငျးတှပေျေါကုနျမှာစိုးလို့လား”
ဧကရဲ့စကားကွောငျ့ ဟနျနီ့ရငျထဲမှာ ဆတျဆတျခါအောငျနာသှားသညျ။ ဟနျနီကတော့ ဧကကို ခဈြလိုကျရတာ ခှငျ့လှတျပေးလိုကျရတာ သူ့ဘကျကနေ ကာကှယျပေးလိုကျရတာ။ သူမို့လို့ ဟနျနီ့ကို ဒီလိုစှပျစှဲရကျတယျ။ ဟနျနီကိုယျတိုငျ သတိမထားမိလိုကျဘဲ ဟနျနီ့လကျတဈဖကျက သူ့ပါးကို လှဲရိုကျပွီးသားဖွဈသှားသညျ။ ဧက မကျြလုံးမြားက ခကျြခငျြး ပို၍ခကျထနျသှားသညျကို မွငျတော့မှ ဟနျနီမှားသှားမှနျး သိလိုကျသညျ။ ပှငျ့နပွေီးသား ကားတံခါးကနေ ထှကျပွေးဖို့ကွိုးစားလိုကျစဉျမှာပဲ ဧကရဲ့ လကျနှဈဖကျက ဟနျနီ့ရဲ့ လညျပငျးကို ရောကျလာသညျ။
ဟနျနီ ဧကရဲ့လကျမြားကို ဖွုတျခရြနျ အမြိုးမြိုးကွိုးစားသညျ။ ကုတျဖဲ့ရိုကျနှကျနသေျောလညျး ဧက က ဘာမှဖွဈပုံမပျေါ။ ဟနျနီ့လညျပငျးကို ပို၍တငျးကွပျအောငျ ညှဈလိုကျသညျ့ အခြိနျတှငျ နာကငျြမှု၊ အသကျရှူမဝမှု၊ ကွောကျရှံ့မှုမြားဖွငျ့ ဟနျနီ မကျြရညျမြားပငျကလြာသညျ။
“ကိုဧကသု ရှငျ ဘာလုပျနတောလဲ… အဲ့ဒီလကျတှကေို ခကျြခငျြးလှတျလိုကျပါ”
ဘယျကရောကျလာမှနျးမသိသော ယမုံက ဟနျနီ့ဘေးနားကနေ အျောပွီး အတငျးဖယျလိုကျတော့မှ ဧက က ဟနျနီ့လညျပငျးကို လှတျလိုကျသညျ။ ယမုံက ဟနျနီ့ကို လကျမောငျးကနတှေဲကာ ကားအပွငျကိုဆှဲထုတျလိုကျပွီး အိမျထဲကိုတှဲချေါသှားသညျ။
ဟနျနီထှကျသှားပွီးမှ ဧက ပုံမှနျအသိပွနျဝငျလာသညျ။ ဘာလို့ ဟနျနီ့ကို ဒီလောကျထိကွမျးကွမျးတမျးတမျး လုပျလိုကျမိသညျဆိုသညျကို သူ စဉျးစားမရတော့။ ခဈြလှနျးလို့ စိတျပူလှနျးလို့ပါ ဟနျနီရယျ…။ ကို့ကို ဒီတဈခါလညျးခှငျ့လှတျပေးပါဦးနျော…
Tags: Fiction Series, Fun, love, psychology, Scare, thoughts